ရပ်တည်မှု၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းများ
History of RIT။ 24 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-09-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dr. Sayne Lei Shwe. "Technology and State Development". Ministry of Science and Technology. Retrieved on 2008-09-13. Archived 10 June 2011 at the Wayback Machine.